Xanuun Aan La Seexanayn Ilaa Qofku Dhimanayo Oo Lagu Arkay Australia… | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Xanuun Aan La Seexanayn Ilaa Qofku Dhimanayo Oo Lagu Arkay Australia…
Xanuun Aan La Seexanayn Ilaa Qofku Dhimanayo Oo Lagu Arkay Australia…
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 14-08-16 10:43 AM Waxa wadanka Australia lagu arkay in muddo ah ka dib xanuun aan la seexan marka uu qofka haleelo, waxaanu qofkaasi soo jeedayaa ilaa inta uu ka dhimanaayo, iyada oo ay ka guurayso luladii.
Xanuunkan oo ah xanuunada la kala dhaxlo ee aan la kala qaadin ayaa lagu arkay laba wiil oo walaalo ah,kuwaas oo ku nool wadanka Australia, waxaana xanuunkaasi ku dhacay awoowgood, ayeydood, aabohood iyo Hooyadood oo lahaa, waxaanay dhinteen iyaga oo aan muddo lix bilood ah seexan.
Xanuunkan ayaa ah mid adduunka dhif iyo naadir ku ah,waxaana lagu magcaabaa Fatal Familial Isomnia,waxay sheegeen dhakhaatiirtu in 10 million ee qof ba lagu arko hal qof,waxaana ilaa hadda loo la’yahay dawo rasmi ah, iyada oo uu qofka maskaxda burburiyo, sidoo kalena uu ugu dambayn dhulka dhigo.
Labadan wiil oo midna 30 sanno jir yahay midna 28 sanno jir yahay ayaa ka dhaxlay xanuunkan qoyskooda oo iyaguna u dhintay xanuunkaasi, waxaanay dhakhaatiirtu sheegayaan in iminka lagula tacaalaayo dhakhtar ku yaala wadankaasi Australia ,gaar ahaana Queensland gobolka lagu magcaabo.
Healy oo kamid ah dadka uu xanuunkaasi haleelay ayaa ka sheekaysay waxyaalaha calaamadaha u ah,waxaanay sheegtay inay xusuusato markii xanuunkani ku dhacay qoyskeeda,iyada oo sheegtay in awoowgeed qaylin jiray, isaga oo indho belay, sidoo kalena waxay sheegtay inuu markii dambe xataa hadalkii joojiyey.
Sidoo kale hooyadeed ayay ka sheekaysay waxyaalihii ay ku aragtay,waxaanay tidhi waxay ahayd qof xoog u shaqeeya hooyaday,iyada oo markii dambe noqotay mid cadho badan, waxaanay waqtigaasi ahayd 2011,waxaanay xaaladaasi ku jirtay ayay tidhi lix bilood.
Xanuunkan ayaa sababaaya inuu meesha ka baxo Protein badan ,sidoo kalena unugyo badan oo maskaxda ah ayaa burburaaya, iyada oo unugyadii hurdada qaabilsanaana ay meesha ka baxayaan.
Wiilashan Ayaan helin wax daweyn ah, madaama oo aanu xanuunkani dawo sax ah lahayn, waxaana arrintan waqtigan ku hawlan dhakhaatiir ka socotay jaamacadda California, kuwaas oo doonaaya inay sameeyaan dawooyin haddii ay awoodaan.